မောင်တော သရက်အုပ်မှ ကလေးငယ်များ ICRC မှ ထောက်ပံ့သည့် ရိက္ခာမရ
မောင်တော ။ ။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့နယ် မြောက်ပိုင်း သရက်အုပ်ကျေးရွာတွင် ICRC မှ ရိက္ခာထောက်ပံ့ပေးခဲ့သော်လည်း ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့က ကလေး ၂၀၀ နီးပါးကို မွေးတိုး မတင်ရသေးဟု အကြောင်းပြကာ… By
မောင်တော ရွှေဇားနှင့် မြို့မတောင်ရပ်ကွက်မှ ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသူ အများစု နိုင်ငံတော်မှ ပေးအပ်သည့် ထောက်ပံ့ကြေးမရ
မင်းပြားတွင် ရိုဟင်ဂျာလူငယ်တစ်ဦး မိုင်းထိ
Covid-19 ရောဂါကာကွယ်ရေး အကြောင်းပြပြီး မောင်တောမြို့မှ ရိုဟင်ဂျာများကို အာဏာပိုင်များက နှိပ်ကွပ်နေ
မောင်တောမြို့တွင် ရိုဟင်ဂျာလူငယ်တစ်ဦး သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ခံရ
Covid-19 ကြောင့် ကန့်သတ်မှုများအကြား မောင်တောမှ ရိုဟင်ဂျာများ စားဝတ်နေရေးကျပ်တည်းနေ
ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် စည်ပင်ကော်မတီက ရိုဟင်ဂျာများကို နေအိမ်ဆောက်လုပ်ခွင့် မပေးသည့်အပြင် တရားစွဲဆိုမည်ဟု ခြိမ်းခြောက်နေ
News မောင်တော သရက်အုပ်မှ ကလေးငယ်များ ICRC မှ ထောက်ပံ့သည့် ရိက္ခာမရ
မောင်တော ။ ။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့နယ် မြောက်ပိုင်း သရက်အုပ်ကျေးရွာတွင် ICRC မှ ရိက္ခာထောက်ပံ့ပေးခဲ့သော်လည်း ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့က ကလေး ၂၀၀ နီးပါးကို မွေးတိုး မတင်ရသေးဟု အကြောင်းပြကာ ထုတ်မပေးဘဲ အလွဲသုံးစား ပြုလုပ်လိုက်ကြောင်း သိရသည်။
အရေးကြီးဆုံးအရာတွေက တရားမျှတမှုရရှိရေးနဲ့ နိုင်ငံတကာ အကာအကွယ်ရရှိရေး
ကိုဇော်ဂျီဝင်း -- မဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ ကလေးငယ်တွေကို ပညာသင်ပေးမယ်
အိုင်စီစီ ရာဇဝတ်ခုံရုံးမှာ မြန်မာ့အရေးကိစ္စ - လက်ရှိဘယ်အခြေနေ ဆိုက်နေပြီလဲ?
မြန်မာအစိုးရရဲ့ စနစ်တကျ နှိပ်ကွပ်မှုကြောင့် အနာဂတ်မဲ့နေသော ရိုဟင်ဂျာကျောင်းသားများ
မောင်တော ။ ။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့နယ် မြောက်ပိုင်း သရက်အုပ်ကျေးရွာတွင် ICRC မှ ရိက္ခာထောက်ပံ့ပေးခဲ့သော်လည်း ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့က ကလေး ၂၀၀ နီးပါးကို မွေးတိုး မတင်ရသေးဟု အကြောင်းပြကာ ထုတ်မပေးဘဲ အလွဲသုံးစား ပြုလုပ်လိုက်ကြောင်း သိရသည်။ နိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက်နေ့တွင် ICRC နိုင်ငံတကာကြက်ခြေနီအဖွဲ့မှ မောင်တောမြို့နယ် မြောက်ပိုင်း သရက်အုပ်ကျေးရွာရှိ ဒေသခံများအတွက် ဆန်၊ ဆီ၊ သကြား၊ ဆား၊ ပဲနှင့် အလှကုန်ပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။ ရိက္ခာများနှင့် ပစ္စည်းများကို ယင်းကျေးရွာတာဝန်ခံ ဦးနူရ်အာလီ… >>> အပြည့်အစုံသို့ >>>
မောင်တော ။ ။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့နယ် မြောက်ပိုင်း သရက်အုပ်ကျေးရွာတွင် ICRC မှ ရိက္ခာထောက်ပံ့ပေးခဲ့သော်လည်း ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့က ကလေး ၂၀၀ နီးပါးကို မွေးတိုး မတင်ရသေးဟု အကြောင်းပြကာ ထုတ်မပေးဘဲ အလွဲသုံးစား ပြုလုပ်လိုက်ကြောင်း သိရသည်။ နိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက်နေ့တွင် ICRC နိုင်ငံတကာကြက်ခြေနီအဖွဲ့မှ မောင်တောမြို့နယ် မြောက်ပိုင်း သရက်အုပ်ကျေးရွာရှိ ဒေသခံများအတွက် ဆန်၊ ဆီ၊ သကြား၊ ဆား၊ ပဲနှင့် အလှကုန်ပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။ ရိက္ခာများနှင့် ပစ္စည်းများကို ယင်းကျေးရွာတာဝန်ခံ ဦးနူရ်အာလီ…
မောင်တော ။ ။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့နယ်၌ Covid-19 ကူးစက်ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုကြောင့် ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသည့် အိမ်ထောင်စုများကို နိုင်ငံတော်မှ ထောက်ပံ့ကြေးများ ပေးအပ်ခဲ့သော်လည်း ရွှေဇားနှင့် မြို့မတောင်ရပ်ကွက်တို့မှ ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသူအများစုကို ပေးအပ်ခြင်း မရှိကြောင်းသိရသည်။ နိုဝင်ဘာလ (၁၃) ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ နာရီအချိန်တွင် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးအောင်ရဲက မြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့သည့် အစည်းအဝေးတွင် ရပ်ကွက်နှင့်ကျေးရွာ အုပ်စု ၉၀ စုရှိ ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသည့်… >>> အပြည့်အစုံသို့ >>>
မောင်တော ။ ။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့နယ်၌ Covid-19 ကူးစက်ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုကြောင့် ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသည့် အိမ်ထောင်စုများကို နိုင်ငံတော်မှ ထောက်ပံ့ကြေးများ ပေးအပ်ခဲ့သော်လည်း ရွှေဇားနှင့် မြို့မတောင်ရပ်ကွက်တို့မှ ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသူအများစုကို ပေးအပ်ခြင်း မရှိကြောင်းသိရသည်။ နိုဝင်ဘာလ (၁၃) ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ နာရီအချိန်တွင် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးအောင်ရဲက မြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့သည့် အစည်းအဝေးတွင် ရပ်ကွက်နှင့်ကျေးရွာ အုပ်စု ၉၀ စုရှိ ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသည့်…
မင်းပြား ။ ။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မင်းပြားမြို့နယ်၊ ဆင်ကျာကျေးရွာအုပ်စု၊ ဟာရပိုင်ကျေးရွာမှ ဒိုလောတ်ခါန်း (ဘ) ဦးအာယုပ်ခါန်း (အသက် ၂၀ နှစ်) သည် ကွမ်းသီးခြံထဲတွင် အလုပ်လုပ်နေစဉ် မြေမြှုပ်မိုင်းထိမှန်ပြီး ခြေထောက်နှစ်ဖက်စလုံးတွင် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ နိုဝင်ဘာလ (၂၀) ရက်နေ့ နေ့လည် ၁၂ နာရီခန့်အချိန်တွင် ဒိုလောတ်ခါန်းနှင့် အခြားတစ်ဦးသည် ၎င်းတို့ အလုပ်လုပ်နေသည့် ကွမ်းသီးခြံတွင် ကွမ်းသီးခူးနေစဉ် မိုင်းတစ်လုံးပေါက်ကွဲပြီး ဒိုလောတ်ခါန်း၏ ခြေထောက်ကို ထိမှန်ကာ ခြေထောက်နှစ်ဖက်စလုံး ပျက်စီး ဆုံးရှုံးသွားကြောင်း ဒေသခံများက… >>> အပြည့်အစုံသို့ >>>
မင်းပြား ။ ။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မင်းပြားမြို့နယ်၊ ဆင်ကျာကျေးရွာအုပ်စု၊ ဟာရပိုင်ကျေးရွာမှ ဒိုလောတ်ခါန်း (ဘ) ဦးအာယုပ်ခါန်း (အသက် ၂၀ နှစ်) သည် ကွမ်းသီးခြံထဲတွင် အလုပ်လုပ်နေစဉ် မြေမြှုပ်မိုင်းထိမှန်ပြီး ခြေထောက်နှစ်ဖက်စလုံးတွင် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ နိုဝင်ဘာလ (၂၀) ရက်နေ့ နေ့လည် ၁၂ နာရီခန့်အချိန်တွင် ဒိုလောတ်ခါန်းနှင့် အခြားတစ်ဦးသည် ၎င်းတို့ အလုပ်လုပ်နေသည့် ကွမ်းသီးခြံတွင် ကွမ်းသီးခူးနေစဉ် မိုင်းတစ်လုံးပေါက်ကွဲပြီး ဒိုလောတ်ခါန်း၏ ခြေထောက်ကို ထိမှန်ကာ ခြေထောက်နှစ်ဖက်စလုံး ပျက်စီး ဆုံးရှုံးသွားကြောင်း ဒေသခံများက…
မောင်တော ။ ။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့နယ်တွင် Stay Home ကြေညာသည့်အချိန်မှစ၍ အာဏာပိုင်များက ရိုဟင်ဂျာများကို ယခင်ကထက် ပိုမို ပစ်မှတ်ထား၍ ဖမ်းဆီး အရေးယူခြင်းများ ပြုလုပ်နေသည်။ မောင်တောမြို့နယ်တွင် Stay Home ကြေညာပြီးနောက်ပိုင်းတွင် နေ့လည် တစ်နာရီနောက်ပိုင်း အပြင်ထွက်ခွင့် ပိတ်ပင်ကန့်သတ်ခဲ့သည်။ ကန့်သတ်ချက်ကို ချိုးဖောက်သူများကို အရေးယူရန်အတွက် Covid-19 စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ ဖွဲ့၍ အရေးယူလျက်ရှိသည်။ ယင်းအဖွဲ့ကို မောင်တော အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းရေးမှူး - BC… >>> အပြည့်အစုံသို့ >>>
မောင်တော ။ ။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့နယ်တွင် Stay Home ကြေညာသည့်အချိန်မှစ၍ အာဏာပိုင်များက ရိုဟင်ဂျာများကို ယခင်ကထက် ပိုမို ပစ်မှတ်ထား၍ ဖမ်းဆီး အရေးယူခြင်းများ ပြုလုပ်နေသည်။ မောင်တောမြို့နယ်တွင် Stay Home ကြေညာပြီးနောက်ပိုင်းတွင် နေ့လည် တစ်နာရီနောက်ပိုင်း အပြင်ထွက်ခွင့် ပိတ်ပင်ကန့်သတ်ခဲ့သည်။ ကန့်သတ်ချက်ကို ချိုးဖောက်သူများကို အရေးယူရန်အတွက် Covid-19 စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ ဖွဲ့၍ အရေးယူလျက်ရှိသည်။ ယင်းအဖွဲ့ကို မောင်တော အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းရေးမှူး - BC…
မောင်တော ။ ။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့နယ် ကညင်တန်းရပ်ကွက်မှ ဦးအီလီယာစ်၏ သားဖြစ်သူ မာမတ်အာယာစ် (ခ) မောင်မောင်လှ (အသက် ၂၇ နှစ်) ကို ဘဂုံးနား (တပ်ဦးချောင်း) ကျေးရွာအုပ်စု ဖွေးရာရွာအဝင်ဝရှိ တံတားအနီးတွင် ကားစီးလာသည့်လူတစ်စုက ကားပေါ်မှ သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ခဲ့သည်။ နိုဝင်ဘာလ (၁၃) ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် မာမတ်အာယာစ် (ခ) မောင်မောင်လှသည် သူငယ်ချင်းနှစ်ဦးနှင့်အတူ ဆိုင်ကယ်ဖြင့် သွားနေစဉ် ညနေ ၅း၃၀ နာရီခန့်တွင် ဘဂုံးနား (တပ်ဦးချောင်း) ကျေးရွာအုပ်စု ဖွေးရာရွာအဝင်၀ တံတားအနီးသို့ ရောက်ရှိသောအခါ Mark II… >>> အပြည့်အစုံသို့ >>>
မောင်တော ။ ။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့နယ် ကညင်တန်းရပ်ကွက်မှ ဦးအီလီယာစ်၏ သားဖြစ်သူ မာမတ်အာယာစ် (ခ) မောင်မောင်လှ (အသက် ၂၇ နှစ်) ကို ဘဂုံးနား (တပ်ဦးချောင်း) ကျေးရွာအုပ်စု ဖွေးရာရွာအဝင်ဝရှိ တံတားအနီးတွင် ကားစီးလာသည့်လူတစ်စုက ကားပေါ်မှ သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ခဲ့သည်။ နိုဝင်ဘာလ (၁၃) ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် မာမတ်အာယာစ် (ခ) မောင်မောင်လှသည် သူငယ်ချင်းနှစ်ဦးနှင့်အတူ ဆိုင်ကယ်ဖြင့် သွားနေစဉ် ညနေ ၅း၃၀ နာရီခန့်တွင် ဘဂုံးနား (တပ်ဦးချောင်း) ကျေးရွာအုပ်စု ဖွေးရာရွာအဝင်၀ တံတားအနီးသို့ ရောက်ရှိသောအခါ Mark II…
မောင်တော ။ ။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့နယ်တွင် Covid-19 ရောဂါကူးစက်ခံရသူ အနည်းငယ်ရှိနေသောကြောင့် လုပ်ငန်းအများစု ပိတ်ထားရသည်။ အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်နေသည့် ဒေသခံအများစုမှာ စားဝတ်နေရေးကျပ်တည်းမှု ရင်ဆိုင်နေရသည့်အပြင် အငတ်ဘေးပင် ကြုံတွေ့နိုင်ရဖွယ်ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။ မောင်တောမြို့နယ်တွင် Covid-19 ရောဂါကူးစက်ခံရသည့် လူနာများတွေ့ရှိခဲ့သဖြင့် ဈေး၊ ဆိုင်များကို နေ့လည် တစ်နာရီထိ ဖွင့်ခွင့်ပြုခဲ့သော်လည်း အောက်တိုဘာလ (၇) ရက်နေ့မှစ၍ ဆေးဆိုင်၊ စားကုန်ဆိုင်၊ မုန့်ဆိုင်၊ ဆေးပေးခန်းနှင့် သားငါးဈေးမှအပ… >>> အပြည့်အစုံသို့ >>>
မောင်တော ။ ။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့နယ်တွင် Covid-19 ရောဂါကူးစက်ခံရသူ အနည်းငယ်ရှိနေသောကြောင့် လုပ်ငန်းအများစု ပိတ်ထားရသည်။ အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်နေသည့် ဒေသခံအများစုမှာ စားဝတ်နေရေးကျပ်တည်းမှု ရင်ဆိုင်နေရသည့်အပြင် အငတ်ဘေးပင် ကြုံတွေ့နိုင်ရဖွယ်ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။ မောင်တောမြို့နယ်တွင် Covid-19 ရောဂါကူးစက်ခံရသည့် လူနာများတွေ့ရှိခဲ့သဖြင့် ဈေး၊ ဆိုင်များကို နေ့လည် တစ်နာရီထိ ဖွင့်ခွင့်ပြုခဲ့သော်လည်း အောက်တိုဘာလ (၇) ရက်နေ့မှစ၍ ဆေးဆိုင်၊ စားကုန်ဆိုင်၊ မုန့်ဆိုင်၊ ဆေးပေးခန်းနှင့် သားငါးဈေးမှအပ…
ယခုခေတ်သည် အင်တာနက်ခေတ်၊ ICT (Information and Communication) နည်းပညာ ခေတ်ဖြစ်သောကြောင့် တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် information သတင်းအချက်အလက်များကို အလွယ်တကူရရှိ ဖတ်ရှုသိရှိနိုင်ပါသည်။ ကမ္ဘာအနှံ့တွင် ဖြစ်ပျက်နေသည့်အကြောင်းအရာများ၊ ရေးသားနေသည်များ၊ ဖတ်ရှုနေသည်များကို ချက်ချင်းဆိုသလို သိနိုင်သည်။ နည်းပညာအဆင့်မြင့် စမတ်ဖုန်းများ ပေါ်လာသည့်အမျှ စမတ်ဖုန်းများအပေါ် စွဲလမ်းမှုများ မည်သည့်အတိုင်းအတာထိ ဖြစ်နေသည်ဆိုသည်ကို Elon Mask တစ်ခါက ပြောခဲ့သည့် စမတ်ဖုန်းနှင့် အခြား gadgets များကြောင့် လူသားများ အမှန်တကယ်… >>> အပြည့်အစုံသို့ >>>
ယခုခေတ်သည် အင်တာနက်ခေတ်၊ ICT (Information and Communication) နည်းပညာ ခေတ်ဖြစ်သောကြောင့် တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် information သတင်းအချက်အလက်များကို အလွယ်တကူရရှိ ဖတ်ရှုသိရှိနိုင်ပါသည်။ ကမ္ဘာအနှံ့တွင် ဖြစ်ပျက်နေသည့်အကြောင်းအရာများ၊ ရေးသားနေသည်များ၊ ဖတ်ရှုနေသည်များကို ချက်ချင်းဆိုသလို သိနိုင်သည်။ နည်းပညာအဆင့်မြင့် စမတ်ဖုန်းများ ပေါ်လာသည့်အမျှ စမတ်ဖုန်းများအပေါ် စွဲလမ်းမှုများ မည်သည့်အတိုင်းအတာထိ ဖြစ်နေသည်ဆိုသည်ကို Elon Mask တစ်ခါက ပြောခဲ့သည့် စမတ်ဖုန်းနှင့် အခြား gadgets များကြောင့် လူသားများ အမှန်တကယ်…
>>> အပြည့်အစုံသို့ >>>
လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုမရှိပါဘူးဆိုတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ငြင်းဆိုချက်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဘာကြောင့် ပြန်ပြီး တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားစေသလဲ?
လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုမရှိပါဘူးဆိုတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ငြင်းဆိုချက်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဘာကြောင့် ပြန်ပြီး တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားစေသလဲ? ဝါရှင်တန်ပို့စ်မှာ ဒေါက်တာဇာနည်ရေးသားထားတဲ့ ဆောင်းပါးကို ဗီအိုအေမြန်မာပိုင်းက ဘာသာပြန် တင်ဆက်ပေးထားတာပါ။ ဆောင်းပါးမူရင်းကို ဒီလင့်ခ်မှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ် - https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/01/15/aung-san-suu-kyi-must-be-held-account/ >>> အပြည့်အစုံသို့ >>>
လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုမရှိပါဘူးဆိုတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ငြင်းဆိုချက်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဘာကြောင့် ပြန်ပြီး တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားစေသလဲ? ဝါရှင်တန်ပို့စ်မှာ ဒေါက်တာဇာနည်ရေးသားထားတဲ့ ဆောင်းပါးကို ဗီအိုအေမြန်မာပိုင်းက ဘာသာပြန် တင်ဆက်ပေးထားတာပါ။ ဆောင်းပါးမူရင်းကို ဒီလင့်ခ်မှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ် - https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/01/15/aung-san-suu-kyi-must-be-held-account/
ဒီမိုကရေစီစနစ်လား၊ တမင်လူမျိုးရေးခွဲခြားသည့် စနစ်လား
အိမ်ထောင်စု ၁၃၀၀ ခန့်ရှိနေသည့် ရပ်ကွက်တစ်ခုတွင်အိမ်ထောင်စု ၅၀ လောက်၏ ဆန္ဒမဲဖြင့်သာ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရွေးချယ်ရန်ပြုလုပ်နေခြင်းသည်ဒီမိုကရေစီကို အိုးမဲသုတ်နေသကဲ့ ဖြစ်နေသည်။ မောင်တောမြို့နယ်၊ မြို့မကညင်တန်းကျေးရွာအုပ်စုကို လွန်ခဲ့သောနှစ်ရာပေါင်းများစွာကပင် ရိုဟင်ဂျာများ တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ထိုကျေးရွာအုပ်စုတွင် မြို့မကညင်တန်းကျေးရွာနှင့် မောင်နီကျေးရွာတို့ ပါဝင်ကြသည်။ ၎င်းရွာနှစ်ရွာတွင် ရွာတည်ကတည်းကပင် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုး တစ်… >>> အပြည့်အစုံသို့ >>>
အိမ်ထောင်စု ၁၃၀၀ ခန့်ရှိနေသည့် ရပ်ကွက်တစ်ခုတွင်အိမ်ထောင်စု ၅၀ လောက်၏ ဆန္ဒမဲဖြင့်သာ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရွေးချယ်ရန်ပြုလုပ်နေခြင်းသည်ဒီမိုကရေစီကို အိုးမဲသုတ်နေသကဲ့ ဖြစ်နေသည်။ မောင်တောမြို့နယ်၊ မြို့မကညင်တန်းကျေးရွာအုပ်စုကို လွန်ခဲ့သောနှစ်ရာပေါင်းများစွာကပင် ရိုဟင်ဂျာများ တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ထိုကျေးရွာအုပ်စုတွင် မြို့မကညင်တန်းကျေးရွာနှင့် မောင်နီကျေးရွာတို့ ပါဝင်ကြသည်။ ၎င်းရွာနှစ်ရွာတွင် ရွာတည်ကတည်းကပင် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုး တစ်…
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ဒုက္ခသည်စခန်းက ပညာသင်ခွင့်မရတဲ့ ရိုဟင်ဂျာကလေးများ
အသက် ၁၀ နှစ်ခန့်အရွယ် အီဗရာဟင်မိုဟာမတ်က ကျောင်းကို ချစ်မြတ်နိုးသူတစ်ဦး ဖြစ်ပြီး၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တုန်းက လေးတန်းကျောင်းသားလေး ဖြစ်ခဲ့တယ်။ သိန်းနဲ့ချီတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကို ထွက်ပြေးကြတဲ့အချိန်မှာ သူ့ရဲ့ မိခင်က တောထဲမှာ ကလေးမီးဖွားခဲ့တာ၊ သူ့ရဲ့ အဖိုး ပစ်သတ်ခံရတာနဲ့ သူ့ရဲ့ မိဘအိမ်ကို မြန်မာစစ်တပ်က မီးရှို့ခဲ့တာတွေကို တွေ့ကြုံခဲ့ရသူပါ။ အီဗရာဟင် က ဆရာဝန်တစ်ယောက် ဖြစ်လာဖို့ အိပ်မက်မက်ခဲ့သူပါ။ ဒါပေမယ့် အခုတော့ သူ့ရဲ့ အိပ်မက်တွေ ငြိမ်သက်သွားပြီး စိတ်ဆိုးမာန်ဆိုးနဲ့ တစ်ခါတစ်လေသာ ပြုံးနိုင်ပါတော့တယ်… >>> အပြည့်အစုံသို့ >>>
အသက် ၁၀ နှစ်ခန့်အရွယ် အီဗရာဟင်မိုဟာမတ်က ကျောင်းကို ချစ်မြတ်နိုးသူတစ်ဦး ဖြစ်ပြီး၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တုန်းက လေးတန်းကျောင်းသားလေး ဖြစ်ခဲ့တယ်။ သိန်းနဲ့ချီတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကို ထွက်ပြေးကြတဲ့အချိန်မှာ သူ့ရဲ့ မိခင်က တောထဲမှာ ကလေးမီးဖွားခဲ့တာ၊ သူ့ရဲ့ အဖိုး ပစ်သတ်ခံရတာနဲ့ သူ့ရဲ့ မိဘအိမ်ကို မြန်မာစစ်တပ်က မီးရှို့ခဲ့တာတွေကို တွေ့ကြုံခဲ့ရသူပါ။ အီဗရာဟင် က ဆရာဝန်တစ်ယောက် ဖြစ်လာဖို့ အိပ်မက်မက်ခဲ့သူပါ။ ဒါပေမယ့် အခုတော့ သူ့ရဲ့ အိပ်မက်တွေ ငြိမ်သက်သွားပြီး စိတ်ဆိုးမာန်ဆိုးနဲ့ တစ်ခါတစ်လေသာ ပြုံးနိုင်ပါတော့တယ်…
အိန္ဒိယက ထွက်မသွားရင် အသတ်ခံရမယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်ခံနေရတဲ့ ရိုဟင်ဂျာများ
အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ ဟိန္ဒူအမျိုးသားရေးဝါဒီ အစိုးရက အိန္ဒိယမှာခိုလှုံနေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည် ၄ သောင်းကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံထဲကို တွန်းပို့နေပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် အောက်တိုဘာလတုန်းက အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ် ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည် ဇာကီရ်ဟူစိန်းက အိန္ဒိယနိုင်ငံတောင်ပိုင်းက မြို့တစ်မြို့ဖြစ်တဲ့ ဟိုက်ဒရာဘတ်မြို့မှာ ဆံပင်ညှပ်နေရင်း ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည် (၇) ယောက်ကို မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်ပို့မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကို TV ဖန်သားပြင်မှာ တွေ့ခဲ့တယ်။ “အဲဒါကတော့ ပေါက်ကွဲအောင် ဖန်တီးလိုက်တဲ့ စနက်မီး၊ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်ပို့ခံရမယ်ဆိုတာက … >>> အပြည့်အစုံသို့ >>>
အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ ဟိန္ဒူအမျိုးသားရေးဝါဒီ အစိုးရက အိန္ဒိယမှာခိုလှုံနေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည် ၄ သောင်းကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံထဲကို တွန်းပို့နေပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် အောက်တိုဘာလတုန်းက အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ် ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည် ဇာကီရ်ဟူစိန်းက အိန္ဒိယနိုင်ငံတောင်ပိုင်းက မြို့တစ်မြို့ဖြစ်တဲ့ ဟိုက်ဒရာဘတ်မြို့မှာ ဆံပင်ညှပ်နေရင်း ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည် (၇) ယောက်ကို မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်ပို့မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကို TV ဖန်သားပြင်မှာ တွေ့ခဲ့တယ်။ “အဲဒါကတော့ ပေါက်ကွဲအောင် ဖန်တီးလိုက်တဲ့ စနက်မီး၊ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်ပို့ခံရမယ်ဆိုတာက …
ရိုဟင်ဂျာ မိန်းကလေးတစ်ဦးရဲ့ ဒုက္ခသည်စခန်းမှ ကောလိပ်သို့ ချီတက်ရာခရီး
Formin Akter ကို ကျွန်မပထမဆုံး တွေ့ဆုံခဲ့ချိန်မှာ သူမက Helen Keller နဲ့ပတ်သက်ပြီး စကားတွေ ပြောချင်ခဲ့တယ်။ အသက် (၁၈) နှစ် အရွယ် Formin က ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းထဲက ဝါးတဲထဲမှာ ပလတ်စတစ် ထိုင်ခုံပေါ်မှာ ထိုင်နေခဲ့တယ်။ သူမနဲ့ သူမရဲ့ မိသားစုဝင်တွေက သူတို့ရဲ့ ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည် သိန်းပေါင်းများစွာလိုပဲ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ် ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်မှု၊ အဓမ္မပြုကျင့်မှုနဲ့ မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှု ဖြစ်စဉ်တွေကနေ ထွက်ပြေးလာခဲ့သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။… >>> အပြည့်အစုံသို့ >>>
Formin Akter ကို ကျွန်မပထမဆုံး တွေ့ဆုံခဲ့ချိန်မှာ သူမက Helen Keller နဲ့ပတ်သက်ပြီး စကားတွေ ပြောချင်ခဲ့တယ်။ အသက် (၁၈) နှစ် အရွယ် Formin က ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းထဲက ဝါးတဲထဲမှာ ပလတ်စတစ် ထိုင်ခုံပေါ်မှာ ထိုင်နေခဲ့တယ်။ သူမနဲ့ သူမရဲ့ မိသားစုဝင်တွေက သူတို့ရဲ့ ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည် သိန်းပေါင်းများစွာလိုပဲ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ် ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်မှု၊ အဓမ္မပြုကျင့်မှုနဲ့ မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှု ဖြစ်စဉ်တွေကနေ ထွက်ပြေးလာခဲ့သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။…
မြန်မာစစ်တပ်၏ ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ခြင်းကို ခံနေကြရသည့် ရခိုင်လူမျိုးများနှင့်အတူ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများ စည်းလုံးညီညွတ်စွာ အတူတကွ ရပ်တည်လျက်ရှိခြင်း2months ago
ရိုဟင်ဂျာ့ ဘဝ5months ago
အသက်တစ်ချောင်း ကျပ်သုံးရာ 10 months ago
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရိုဟင်ဂျာလူငယ်ညီလာခံ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် 11 months ago
ဂမ်ဘီးယားနိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံကို ICJ မှာ တရားစွဲဆိုခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဒေါက်တာဇာနည်ရှင်းပြ 1 year ago
ချစ်မြေမွေးရပ်က ဝေးသနှင့် 1 year ago
"လ" ကလေး မပေါ်လာပါစေနှင့် 1 year ago
VOA မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် -- မူရင်းနေရပ်မှ ဖယ်ရှားခံရသူများ
ဂျီနိုဆိုက်မှ အသက်ရှင်လွတ်မြောက်လာသူများ မြန်မာနိုင်ငံပြန်ရန် ကြောက်ရွံနေ
တိုလာတူလီတွင် အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်မှု
ဖုံးကွယ်ထားသည့် မြန်မာနိုင်ငံမှ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု